Fitodika mpamari-toe-javatra - Wikipedia
Ny fitodika mpamari-toe-javatra dia fitodiky ny fehezanteny izay misy lazaina mitana tsinjara asa toe-javatra sy entimilaza(matoanteny na sokajy hafa) amin'ny endrika hafa fa tsy mitovy amin'ny an'ny matoanteny manano. Io lazaina toe-javatra io dia fameno mpamari-toe-javatra amin'ny fitodika hafa (indrindra ny fitodika manano).
Amin'ny fiteny malagasy, ny fehezanteny mitodika amin'ny lazaina toe-javatra dia misy matoanteny foronin'ny fototeny aman-tsirinteny sara-droa (a - ... - ana, i - ... - ana, aha -...- ana, sns) atao hoe "matoantenin'ny toe-javatra". Ny haiteny ara-piofohana anefa manamarika fa misy matoentenin'ny mpandray na hafa izay ahitana tsirin-teny sara-droa koa.
Ilalaovan'ny ankizy baolina ny eo an-tokontany. (Matonteny mpamari-toe-javatra: i-lalaov-ana; lazaina toe-javatra: ny eo antokontany).
Ao amin'ny haiteny malagasy dia manavaka fitodika toe-javatra maromaro ny haiteny ara-piofohana, dia ny fitodika toe-javatra fotoana, ny fitodika toe-javatra toerana, fitodika toe-javatra fomba ary ny fitodika toe-javatra antony. Amin'ny ankapobeny, izay ataon'ny haiteny araka anjara asa hoe "fitodika mpamari-toejavatra" dia ataon'ny haiteny ara-piofohana hoe "fiendrika ananovana".
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fitodika_mpamari-toe-javatra&oldid=977088"
Voaova farany tamin'ny 18 Novambra 2019 amin'ny 09:33 ity pejy ity.